तपाइँको राशिफल : बि.सं. २०७४ साल चैत्र २ गते शुक्रबार | शुभ दिन
तपाइँको राशिफल : बि.सं. २०७४ साल चैत्र २ गते शुक्रबार
शुभदिन संवाददाता March 15, 2018 (11 महिना पहिले)
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल चैत्र २ गते शुक्रबार इश्वी सन २०१८ मार्च १६ तारीख चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथी चन्द्रमा कुम्भ राशिमा सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु भद्रकालीपीठमा लिङ्गो उत्थान गर्ने – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
मित्रजनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेकोछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । कुलकुटुम्बको साथ सहयोग ले नयाँ कार्यको थालनि हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
आफन्त जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पुग्नेछ । प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ ।सामान्य कार्यका निम्ति धेरै समय र परिश्रम खर्चिनु पर्ने छ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ ।
अरुले गरेको गलत कामको आरोप तपाईले भोग्नु पर्ला मित्रजन हरुको प्रशन्नताका निँित सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । यात्रा झन्झट पुर्ण रहन सक्छ । खराब संगतका कारण कार्यसम्पादनमा असमन्जस उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
आफन्तजन हरुको साथ सहयोगको कमि महसुस हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । अपरीपक्क निर्णयले तपाई लाई गलत साबित गर्न सक्नेछ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ ।
मानसिक द्वुबिदाका कारण दाम्पत्य सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । बाणीमा प्रभाब रहने योग रहेको छ । ब्यापार ब्यवसायमा भने मनग्य लाभ प्राप्त रहला । सभासम्मेलनमा सरीक हूने अवशर जुट्रने छ ।
मनप्रशन्न रहला । स्वास्थ सम्बन्धी समस्याले सताउनाले साधारण खर्चको सामना गर्नु पर्ला । मान्यजनको साथ सहयोमा बृद्धि हुनेछ । प्रतिस्पदा जन्य क्षेत्रमा सबल रहेतापनि कुराकाट्ने ब्यक्ति हरुको बृद्धिहुनाले सजग रहनु होला ।
सामान्य यात्रा पश्चात आम्दानिमा बृद्धि हुनेछ । कार्यसम्पादनमा उत्पन भयले आत्मबिश्वासमा कमि आउनेछ । बौदिक ब्यक्तिको सामु आफुकमजोर भएको अनुभब हुनेछ । तपाई सगँ प्रतिस्पर्दा गर्ने ब्यक्तिहरुको बृद्यि हुनेछ ।
भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु पर्ला । जिबन साथीको सहयोमा गरीएका कार्यहरु सुदृण रहनेछन । कार्यक्षेत्रको लगनसिलताले प्रतिष्ठीत तुल्याउनेछ । पारीबारिक मनोरञ्जनका निम्ती धेरै समय र पैसा खर्चनु पर्नेछ ।
अधिक आत्मबिस्वासका कारण आलोचित हुने सम्भाबना रहेको छ । शत्रुपरास्त्र रहने तथा शुभ चिन्तकको बृद्धि हुनेछ । कार्य क्षेत्रको त्रुटिले सामान्य काममा अपजसको भागीदार भईनेछ । सभासम्मेलनमा सरीक हूने अवशर जुट्रने छ ।
खानपानका बिषेश ध्यान दिनु होला । बिद्या क्षेत्रभने सबल रहनेछ । आफुभन्दा सानाको सहयोयमा कार्यक्षेत्रमा दिगो सफलता प्राप्त रहनेछ । यात्रामा सजग रहनुहोला चोटपटकको सम्भाबना रहेको छ ।
भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा साधारण खटपट रहन सक्नेछ । मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य खराबि उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य कार्यका निम्ति धेरै श्रम खर्चनु पर्नेछ ।
आत्मबिश्वासका श्रेत्रमा बृद्धि हुनेछ । मित्रजनको साथ सहयोगमा कार्यसम्पादनमा मद्दत मिल्नेछ । प्रतिस्पर्दामा अबल स्थान प्राप्त रहला । पारीवारीक मनोरञ्जनमा निम्ती समय ब्यतित रहला ।
माेरङ रतुवामाइमा नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक सस्था इजरायल समन्वय समितिबाट सहयोग हस्तान्तरण